Trano sy fianakaviana | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Topic: Home and Family
Inona no homena lehilahy iray amin'ny 23 Febroary?
Ny mpiaro ny Andron'ny Tanindrazana ao amin'ny firenentsika dia nivadika ho Andron'ny Lehilahy. Mampiasa 23 Febroary izahay mba hanomezana fanomezana mahafinaritra ho an'ny lehilahy, tsy ijerena raha sendra tafika izy ireo. SY ...
Famaritana ny parrot mahery sy ny hafa
Betsaka ny olona mitazona biby fiompy samy hafa ao an-trano. Ny budgerigar dia mahazatra. Ny famaritana ho an'ny ankizy dia aseho amin'ny antsipiriany, miaraka amin'ny sary hanazavana mazava hoe inona ilay karazana vorona. Mba hitazomana izany ao an-trano dia zava-dehibe ny fahalalana ...
Miompy amin'ny fety orinasa - tena tso-po amin'ny teninao manokana
Inona no atao hoe toast amin'ny fety orinasa? Raha tenenina amin'ny teniny manokana dia mivadika fampisehoana tena izy izy io indraindray. Tokony omanina mialoha ny kabary. Ny fahaizana milaza teny vitsivitsy amin'ny microphone ampahibemaso, eo amin'ireo mpiara-miasa dia ...
Bacteriuria mandritra ny fitondrana vohoka: soritraretina, fitsaboana
Mandritra ny fitondrana vohoka, ny reny miandry vohoka dia mora tohina amin'ny fahasalamany. Na izany aza, tsy mahavonjy ny firaisana ara-drariny amin'ny aretina sy ny aretina isan-karazany izany. Matetika ny reny miandry vohoka dia miatrika ...
Anaram-pamafana fohy ho an'ny alika (ankizilahy sy ankizivavy)
Ny ankamaroan'ny olona, ​​alohan'ny hahazo alika dia mahita anarana mialoha, manandrana maminavina ny fihetsika. Ary miaraka amin'izay koa, ny olon-drehetra te hanome anaram-bosotra fiantsoana am-boalohany sy tsy hay hadinoina. Anaram-bosotra mahafinaritra ho an'ny alika dia ...
Fisakafoanana feno baolina: famaritana sy tombontsoa. Ahoana no hanaovana dobo filan-doha maina?
Betsaka ny mahafinaritra ho an'ny ankizy amin'izao androntsika izao. Amin'ity lahatsoratra ity dia hampahafantarina anao amin'ny pisinina baolina maina. Ho hitanao hoe inona ny tombony ananan'ny foibe filalaovana toy izany. Jereo koa hoe ohatrinona ...
Ny vondron'ny ankizy madinika. Fianarana any amin'ny tarika afovoany
Ny vondrona afovoan'ny akaninjaza dia atrehin'ireo zaza efa-taona. Ny mpianatra toy izany dia mahatakatra ny fifandraisana misy eo amin'ny taranja. Amin'ny hetsika, manandrana mampiseho ny fihetsiky ny olon-dehibe izy ireo. Rehefa miseho ny toe-javatra sarotra dia manandrana tsy miankina ny ankizy ...
"Felix" (saka saka): hevitra momba ny mpividy sy ny mpitsabo biby
Tompon'ny biby fiompy be volo no misafidy ny hanome sakafo ny saka, saka ary saka azy ireo amin'ny sakafo vonona hihinana. Androany eny amin'ny tsena rosiana dia misy vokatra marobe avy amin'ny mpamokatra samihafa, ary ny iray amin'izy ireo dia saka ...
Fiompiana akanjo lavenona: fifantenana, fividianana, fikarakarana, fisiahana, vidiny ary fanamarinana ny tompony. Avy amin'ny matihanina amin'ny mpihinam-bary tsy manam-bola sy manofana
Raha manana alika amin'ity karazany ity ianao izay mila fikolokoloana tsy tapaka, dia mila clipper manokana ianao. Na dia mpitsidika salon manokana aza ny biby fiompinao dia ...
Broad Maslenitsa. Fankalazana ny Shrovetide
Wide Maslenitsa, Krivosheyka, Pancake, Obyedukha, Maslenaya herinandro - ity dia fialantsasatra iray ihany izay ankalazaina saika manerana an'izao tontolo izao. Ny dikan'ity fialantsasatra ity dia ny manavaka ny ririnina sy ny lohataona ...
Ahoana ny fomba hanesorana zazalahy vao teraka? Impiry impiry raha te hanasa ilay zazalahy
Matetika ny ray aman-dreny dia miahiahy momba ny fampiharana marina ny fomba fidiovana, ao anatin'izany ny fandroana, ny fanasana sy ny fitsaboana ireo taovam-pananahana ivelan'ny zaza vao teraka miaraka amin'ny vovoka, menaka na menaka. Ny hoditry ny zaza dia marefo tokoa, raha tsy misy ...
Croup amin'ny ankizy. Ny soritr'aretina sy ny fitsaboana ny croup amin'ny ankizy
Ny aretina amin'ny lalan-pisefoana izay miteraka stenosis amin'ny larynx dia antsoina hoe croup amin'ny siansa ara-pitsaboana. Ity aretina ity dia miaraka amin'ireto soritr'aretina manaraka ireto: sempotra mafy ny fofonaina, manafosafo, kohaka "mihombo", sempotra. Croup an'ny ankizy - ...
Anaran'ny vondrona gergie - ahoana no hisafidianana?
Ny anaran'ny vondrona ao amin'ny akaninjaza dia misy lanjany lehibe. Mahaliana kokoa ho an'ny olon-dehibe sy ny ankizy izy io, fa tsy ny "vondrona tanora kokoa" na "vondrona No. 2" mahazatra. Dia miseho ny maha-izy azy. Miaraha amin'ny ...
Nahoana ianao no mila mari-pamantarana? Ny marika dia marika ho famantarana. Ahoana no anaovany izany?
Io fomba fanondroana biby io dia efa nampiasaina hatry ny ela tamin'ny biby fiompy sy fiompiana, ary na dia amin'ny biby dia aza. Ity farany dia nanatanteraka fanodikodinana toy izany mba handinihana ny fifindra-monina. Amin'ny fambolena, manamarika ...
Teratany miloko marevaka: karazana kilalao, fikarakarana ary fikojakojana
Ny tertera kilalao volo malefaka dia kely ny habeny. Saingy solontena feno amin'ny taranany izy. Tsy sarotra ny mitazona an'io alika io, satria kely ny kilalao terrier, milanja 2 kg eo ho eo, izay latsaky ny ...
Nahoana ny saka no teraka amin'ny maso samy hafa?
Noheverina hatry ny ela fa ny saka manana maso samy hafa dia mitondra vintana tsara ho an'ny tompony. Niady hevitra nandritra ny taona maro ny mpahay siansa momba an'io fahitana tsy manam-paharoa sy mampahatahotra io. Nisy ny niady hevitra ...
Catfish Synodontis: karazana, famaritana sy votoaty
Miatrika olana matetika ny aquarist an'ny novice. Ny fanambanin'ny aquarium dia tena tototry ny silt, ny rano lasa maitso, ny trondro lafo dia marary ary maty. Tsy afaka manao raha tsy misy ny toro-hevitra matihanina eto. Ary ny iray amin'izy ireo ...
Dog Italian Greyhound: famaritana ny zaridaina (sary)
Ny alika greyhound italianina dia biby kely, kanto ary mahafinaritra izay manana toetra malefaka ary mifanerasera tsara amin'ny ankizy, eny fa na dia ny zazakely aza. Saro-kenatra ny biby, ka ny valiny eo no ho eo dia hanaraka fihetsika tsy ampoizina. Greyhound italianina ...
Fitaovana tsy nentim-paharazana ho an'ny fanabeazana ara-batana amin'ny kolejy. Fanabeazana ara-batana mahasoa
Ny fampihetseham-batana ho an'ny tsirairay dia tokony ho eo amin'ny fiainana amin'ny fotoana ilana azy io mba hihazonana toe-pahasalamana sy endrika tsara. Fotoana fanabeazana ara-batana ao amin'ny akanin-jaza ...
55 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,886.